Virtualization: သင်၏ GNU / Linux Distro ကို၎င်းနှင့်သင့်လျော်သောပတ် ၀ န်းကျင်တစ်ခုဖြစ်စေပါ Linux မှ
La Virtualization နည်းပညာဆိုင်ရာအယူအဆတစ်ခုအနေဖြင့်၎င်းသည်ကျယ်ပြန့်သောခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ရှင်းပြရန်ရှုပ်ထွေးသော်လည်း၊ အခြားအချိန်များတွင်ဘလော့ဂ်တွင်အတော်လေးကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းလောက်သောအဖြေကိုတင်ပြထားသည်။
အကျိုးဆက်အားဤစာအုပ်သည်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်ကိုအနည်းငယ်ပိုမိုအာရုံစိုက်ရန်ရည်ရွယ်သည် GNU Linux / BSD လည်ပတ်ရေးစနစ်များသေးငယ်တဲ့အရာအားလုံးကိုအလေးထားပါ ဘက်ပေါင်းစုံ software ကိုဖြေရှင်းချက် သူတို့ကိုဒီအလုပ်ထွက်သယ်ဆောင်ရန်။
Operating Systems Virtualization: 2019 အတွက်ရရှိနိုင်သောနည်းပညာများ
1 Virtualization ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
2 Virtualization: ရိုးရိုး application များနှင့် package များရနိုင်သည်
2.2 GNOME သေတ္တာများ (သေတ္တာများ)
2.3 Virt-Manager ပါ
2.5 ဆက်စပ်စာကြည့်တိုက်များနှင့်အထုပ်များ (မှီခိုမှုများ)
အတိုချုပ်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အယူအဆကိုကိုးကားမည် ယခင်ဆက်စပ် postအကယ်၍ ဤစာတမ်းကိုဖတ်ပြီးနောက်စိတ်ဝင်စားသူမည်သူမဆိုဘာသာရပ်အပေါ်ပိုမိုနက်ရှိုင်းစေလိုလျှင်၊
"Operating Systems ၏ Virtualization သည်အခြေခံအားဖြင့်တူညီသော Hardware တွင် Operating Systems ကိုလုံးဝလွတ်လပ်သောနည်းလမ်းဖြင့်မျှဝေသုံးစွဲခြင်းပါဝင်သည်။ သို့သော်အားလုံးသည်မည်သည့်ပုဂ္ဂလိက OS () ည့်) နီးပါးသို့မဟုတ်အခမဲ့ဖြစ်စေ virtualization ကိုပိုမိုအဆင်ပြေစွာလုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ သီးခြား hard drive မလိုပဲစစ်ဆေးရန်အတွက် (host) ။"
"လက်ရှိရရှိနိုင်သောနည်းပညာအားလုံးသည် ၄ ​​င်းတို့ကိုတပ်ဆင်ရန်၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုနှင့်၎င်းတို့ကိုကျွမ်းကျင်ရန်လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများအလွယ်တကူရရှိခြင်းတို့အတွက်ကွဲပြားသောအဆင့်အမျိုးမျိုးရှိသည်။"
Virtualization: 2019 အတွက်ရရှိနိုင်သောနည်းပညာများ
Virtualization: ရိုးရိုး application များနှင့် package များရနိုင်သည်
အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လူသိအများဆုံးနှင့်တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်ရရှိနိုင်သည့်အသုံးချပရိုဂရမ်များအကြောင်းဖော်ပြထားသည်နှင့် / သို့မဟုတ်အသုံးပြုသည် GNU Linux / BSD လည်ပတ်ရေးစနစ်များပုဂ္ဂလိကနယ်ပယ်၌ဆိုလိုသည်မှာ Distros သည်ပုဂ္ဂလိကရည်ရွယ်ချက်များအတွက် (အိမ်) နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နယ်ပယ်များတွင်အသုံးပြုသည်။ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ကုမ္ပဏီများ၏ဆာဗာနယ်ပယ်တွင်ဖြစ်သည်။
ဤစာရင်းတွင်ပါဝင်ခြင်းမရှိကြောင်းသတိပြုပါ virtualization နည်းပညာများ ထိုကဲ့သို့သောကဲ့သို့ပေါင်းစည်း, All-In-One သို့မဟုတ် turnkey ဖြေရှင်းချက်အဖြစ်လာပါတယ် ပရိုမိုးရှင်း.
VirtualBox တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်2Hypervisor အမျိုးအစား multiplatform ကိုဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်လက်ရှိ (သို့) အဟောင်းဗားရှင်းများပါရှိသည့်မည်သည့် Host (Computer) တွင်မဆိုတပ်ဆင်ပြီးတပ်ဆင်နိုင်သည်။ လည်ပတ်မှုစနစ်များ Windows, Linux, Macintosh, Solaris, OpenSolaris, OS /2နှင့် OpenBSD ။
ဒါဟာရှိပါတယ် စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသံသရာ ၎င်းကိုအခြားအလားတူဖြေရှင်းနည်းများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်စေသောအလွန်ထုတ်ပေးသောမကြာခဏထုတ်လွှတ်မှုများနှင့်အတူ features နဲ့လုပ်ဆောင်ချက်များကို၏လေးမွတျအရေအတွက်၊ သူလည်ပတ်နိုင်သည့် operating ည့်လည်ပတ်မှုစနစ်များနှင့်၎င်းကိုဖွင့်နိုင်သည်။
အများစုအတွက် GNU Linux / BSD Distro လျှောက်လွှာတွင်ပါဝင်သည်ဟုဆိုသည် repositoriesအောက်ပါနှင့်အတူ, ဒါ command ကိုအမိန့် များသောအားဖြင့်ထိုသူအပေါင်းတို့၌ install လုပ်:
VirtualBox အတွက်သတိပြုသင့်သည်မှာဤ application ကိုအသုံးပြုသောအခါ install လုပ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည် « Guest ည့်သည်ဖြည့်စွက်ချက်များ» နှင့် "Extension Pack"။ ထို့ကြောင့်ဤနှင့်အခြားတပ်ဆင်မှုပုံစံများအတွက်အောက်ပါသို့သွားရန်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည် VirtualBox တရားဝင်လင့်ခ်။ VirtualBox ၏အင်္ဂါရပ်အချို့ကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစေရန်သင်နှင့်သက်ဆိုင်သောကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်ထုတ်ဝေမှုကိုလေ့လာနိုင်သည်။
Virtualbox - ဤလျှောက်လွှာကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုအသေးစိတ်လေ့လာပါ
GNOME သေတ္တာများ (သေတ္တာများ)
GNOME သေတ္တာ အဆိုပါ၏ဇာတိ application ဖြစ်ပါတယ် GNOME desktop, အဝေးမှသို့မဟုတ် virtual system များဝင်ရောက်ဖို့အသုံးပြုသည်။ Boxes or Boxes သည် virtualization နည်းပညာကိုအသုံးပြုသည် QEMU, KVM နှင့် Libvirt.
ထို့အပြင်၎င်းကိုလိုအပ်သည် စီပီယူ ဟာ့ဒ်ဝဲအထောက်အကူပြုသော virtualization အချို့နှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါစေ (Intel VT-x ဥပမာ); ထို့ကြောင့်, GNOME သေတ္တာ အလုပ်မလုပ်ပါဘူး CPU များ ပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူ Intel Pentium / Celeronကတည်းကသူတို့ကဒီဝိသေသကင်းမဲ့။
ဒါဟာမီးမောင်းထိုးပြရကျိုးနပ်သည် GNOME သေတ္တာ ဒီဟာကကမ္ဘာကြီးကိုအသစ်အဆန်းအသုံးပြုသူများနှင့်အသစ်ရောက်ရှိလာသောသူများကိုရည်ရွယ်သောအလွန်ရိုးရှင်းသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည် Linux ကိုသိပ်ထည့်သွင်းမထားဘူး configuration options အများအားဖြင့်လူသိများပြီးထိုကဲ့သို့သောကဲ့သို့သောအခြားသူများအတွက်အသုံးပြုကြသည် VirtualBox။ ဤလျှောက်လွှာအကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်အတွက်အောက်ပါသို့သွားရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် GNOME သေတ္တာများတရားဝင် link ကို။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်တွင်ပိုမိုနက်ရှိုင်းစေရန်သင်နှင့်သက်ဆိုင်သောကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်ထုတ်ဝေမှုကိုလေ့လာနိုင်သည်။
Gnome Box သည်အကောင်းဆုံး open source virtualization tool တစ်ခုဖြစ်သည်
Virt-Manager ပါ သည် Virtual Machine Manager ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် desktop user interface တစ်ခုဖြစ်သည် libvirt။ ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်စီမံခန့်ခွဲသော virtual machine များကိုရည်ရွယ်သည် KVM, ဒါပေမယ့်လည်းကစီမံခန့်ခွဲသောသူတို့အားကိုင်တွယ် ဇင် y LXC.
Virt-Manager ပါ အပြေးဒိုမိန်းများ၊ သူတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုစာရင်းဇယားအကျဉ်းချုပ်ကိုတင်ပြသည်။ wizards များသည်ဒိုမိန်းအသစ်များဖန်တီးရန်နှင့် domain နှင့် virtual hardware တို့၏အရင်းအမြစ်များကိုခွဲဝေသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ခြင်းများကိုခွင့်ပြုသည်။ သုံးစွဲသူကြည့်ရှုသူ VNC y နံ့သာ Integrated သည် guest domain အတွက်ပြည့်စုံသော graphical console ကိုပေးသည်။
ဒါဟာမီးမောင်းထိုးပြရကျိုးနပ်သည် Virt-Manager ပါ ၎င်းသည်၎င်းသည်ရိုးရှင်းသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းထက်များစွာပိုမိုပြည့်စုံသည် GNOME သေတ္တာထို့ကြောင့်၎င်းကိုလက်ရှိအဆင့်မြင့်စက်များတစ်ခုလုံး၏စီမံခန့်ခွဲမှုကိုအလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သောကြောင့်၎င်းကိုပထမအဆင့်ရှိအလယ်အလတ်အဆင့်သို့မဟုတ်အဆင့်မြင့်သုံးစွဲသူများအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်။ ဤလျှောက်လွှာအကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်အတွက်အောက်ပါသို့သွားရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် Virt-Manager တရားဝင် link။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်တွင်ပိုမိုနက်ရှိုင်းစေရန်သင်နှင့်သက်ဆိုင်သောကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်ထုတ်ဝေမှုကိုလေ့လာနိုင်သည်။
Debian ရှိ Qemu-Kvm + Virt-Manager - အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကွန်ပျူတာကွန်ယက်များ
Qemu ယေဘူယျအားဖြင့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်စက် virtualizer နှင့် emulator သည်လည်ပတ်မှုစနစ်နှင့်ပရိုဂရမ်များကိုအလွန်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည့်စက်တစ်လုံးအတွက်ပြုလုပ်ထားသောပရိုဂရမ်များလည်ပတ်နိုင်ခြင်းနှင့် host မှ CPU ပေါ်တွင် guest ည့်သည်ကုဒ်နံပါတ်တိုက်ရိုက်လည်ပတ်ခြင်းဖြင့်အနီးအနားရှိစွမ်းဆောင်ရည်ကိုရရှိနိုင်သည်။ ။
KVM အဓိက virtualization အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်သီးခြားပရိုဆက်ဆာ module တစ်ခုထောက်ပံ့ပေးသော loadable kernel module တစ်ခုပါဝင်သော virtualization extensions (Intel VT or AMD-V) ပါ ၀ င်သော x86 hardware ပေါ်တွင် Linux အတွက် virtualization အပြည့်အဝဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် Qemu တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။
ဒါဟာမီးမောင်းထိုးပြရကျိုးနပ်သည် Qemu-KVM ၎င်းသည်အလွန်ပြည့်စုံသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်တုပပြီးအခြားသောအဆင့်တူအဆင့်မြင့်ကိရိယာများနှင့်မတူပဲ၎င်းကိုတုပရုံသာမက virtualizes ပြုလုပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည် WMWarevirtualization ကိုသာခွင့်ပြုသည်။ ဤလျှောက်လွှာအကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်အတွက်အောက်ပါသို့သွားရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် Qemu-KVM တရားဝင်လင့်ခ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်တွင်ပိုမိုနက်ရှိုင်းစေရန်သင်နှင့်သက်ဆိုင်သောကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်ထုတ်ဝေမှုကိုလေ့လာနိုင်သည်။
QEMU 5.1 သည်ဤနေရာတွင်ရှိပြီးအပြောင်းအလဲ ၂၅၀၀ ခန့်ပါ ၀ င်ပြီး၎င်းသည်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်
ဖော်ပြခဲ့တဲ့ဒီနောက်ဆုံး ၃ ခုဟာများသောအားဖြင့်၊ ဆက်နွယ်မှု (ဆက်နွယ်မှု) ကို dependencies များအဖြစ်ထည့်သွင်းလေ့ရှိတယ်။ ဒါကြောင့်လိုအပ်ရင်၊ သူတို့ကိုမှီခိုစရာများနှင့်အခြားလိုအပ်တဲ့အသုံးဝင်သော packages များနှင့်အတူအောက်ပါ command ကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။
အမှု၌သင်ကအခြား install လုပ်ချင်တယ် virtualization နည်းပညာများ ရရှိနိုင်ပါသည် Linux / BSD သင်ရွေးချယ်နိုင်သည် -
အောက်ပါ Command ဖြင့် Install လုပ်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောက်ပါက install လုပ်ပါ ယခင်ဆက်စပ် post ခေါင်းစဉ်ဖြင့်:
ဤနေရာတွင်ဖော်ပြသော package အားလုံး၏အမည်သည် မူတည်၍ အနည်းငယ်ကွဲပြားနိုင်သည်ကိုသတိရပါ GNU Linux / BSD Distro သင်အသုံးပြုသောကြောင့်သင်တစ်ခုတပ်ဆင်ခြင်းကိုမလုပ်ဆောင်ပါကသင့် Distro ရှိမှန်ကန်သောအမည်သို့မဟုတ်အလားတူအမည်ကိုစစ်ဆေးပါ။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Tecnologías de virtualización» ယင်း၏ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောကြောင့်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အများစုကိုကျော်ရရှိနိုင်မှုကြောင့်ဤနေရာတွင်ဖော်ပြခဲ့တယ် GNU / Linux Distros; တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Virtualization ။ ။ သင်၏ GNU / Linux Distro ကို၎င်းနှင့်သင့်တော်သောပတ် ၀ န်းကျင်တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲပါ
ငါတကယ်ပဲ Gnome Boxes သည် Arch Linux မှထောက်ပံ့သော application ၏ဗားရှင်းနှင့်အတူအနည်းဆုံး Celeron 3350 နှင့်အလုပ်လုပ်ကြောင်းသတိပြုပါ။
နှုတ်ခွန်းဆက်စကား, Voimer ။ သင်၏မှတ်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပြီး Gnome Boxes နှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏အတွေ့အကြုံများကိုဖြည့်ဆည်းပေးပါ။
ကျွန်ုပ်အသုံးပြုသောအလွန်ကောင်းသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာ GNU / Debian ဖြစ်သည်။ Proxmox VE နှင့်အတူ။ https://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_Buster
José Luis နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။ မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ၎င်းသည်သင့်အတွက်အသုံး ၀ င်ပြီးသင့်ကိုကြွယ်ဝစေသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အလွန် ၀ မ်းသာပါသည်။
Google က GitHub ကို Widevine နှင့်ဆက်စပ်သော 135 repositories ကိုပိတ်ပင်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်